Somalitalk.com Online Community. Umuuraha Islaamka
24 Jan 2001 - 29 Oct 2004
Aan isla lafa-gurno meelaha Islaamka looga soo duulo
QEEBTII 5:AAD DHAXALKA & DIYADA
W.Q.: Cabdirisaaq Maxamed
Alle wuxuu yidhi:''Wuxuu idiin dar daamayaa Eebbe caruurtiinna kan lab la mid qaybta labo dhadig" -(4.11).
Rag iyo haween mid kastaa qayb ayuu ku leeyahay waxay ka tagaan waalidkood ama qaraabadii kiisa yar iyo kiisa badanba, waana qadar xukuman. Qaybinta dhaxalka, sida cadda, waxay tahay mid ku salaysan culayska iyo takaaliifta dhaqaale uu Allah ku waajib yeelay mid waliba oo kamid ah. Haweenka waxaa mar waliba dhaqaaleyntooda ka masuul ah aabayaalkood, haddiii aan la qabin, haddii la qabana ninkeeda ayaa masruufkeeda iyo marashadeeda ka masuul ah. Intaas waxaa dheer in haweenku uu Allah u jideeyey in la siiyo meher kolkii la nikaaxayo.
Haddii aan dhinaca kale ka eegno, waxaa ninka lagu waajib yeelay inuu bixiyo meher inuu xaaskiisa siiyo marasho iyo masruuf iyo inuu bixiyo masruufka iyo marashada caruurta. Intaasi waxaa dheer in haddii haweeneydu leedahay hanti gaar ah, aysan waxba iyadu waajib kua aheyn in ay ka bixiso masruufka reerka maadaama uu Allah taasi uu ku waajib yeelay ninkeeda.
Markii loo yimaado xuquuqda haweenka ee ku saabsan lahaanshaha hanti u gaar ah, waxaa arki karnaa in uu Islaamku burburiyey dhaqamadii xun xumaa iyo caddaalad darradii lagula dhaqmi jiray haweenka Islaamka ka hor. Waxaa dhaqamadaasi kamid ahaa in qofta haweeneyda ah aysan hanti yeelan karin isla markaasna aysan waxba dhaxli karin amase in ciriiri laga gelin jirey in ay siday doonto u tasarufto hantideeda. Wuxuu Islaamku sugay xaqa ay haweenku u leeyihiin in ay hanti yeeshaan(oo shareecada waafaqsan) ay u tasarufi karaan hantidooda. Waxaa loo jideeyay haweenka in ay wasyon karaan, waxna dhaxli karaan sida ragga oo kale, waxaana la siiyay xaqa beeca iyo shiraada, in ay wax waqfi karaan, waxna sadaqaysan karaan, xawaalad samaynn karaan, kafaalad samayn karaa.
DIYA BIXINTA (MAGTA)
Waxaa culima farabadan qabtaa in diyada amase magta laga bixinayo haweyneydu ay la egtahay nus inta laga baxsho ninka. Laakiin ma jiro xadiis sugnaantiisa la isku wada waafaqsanyahay (waxaa jira laba axaadiis oo sidaa ku soo arooray).
Laakiin Ibn Calliyah iyo Al-asm ee kamid ahaa fuqahaadii salafka waxay ku tageen in ragga iyo haweenku ay ku siman yihiin diya bixinta amase magta. Arrinkaanna wuxuu waafaqayaa xadiiska saxiixa ee laga weriyay rasuulka (s.c.w.) ee oranayo ''naf walba (magteedu) waa 100 halaad''. Fiiri kitaabka niil al-awdhaar, baabka ''magta haweeneyda'' (7/2224-227)
Waxaa dhacday samankii nabigeena (s.c.w.) in nin yahuudi ahaa uu la kulmay gabar yar oo xiran qalin yar. Gabadhii yareet ayuu yahuudigii ka furtay qalinkii ay xirneed ka dibna wuu dilay oo dhagax ayuu ku dilay. Gabadhii oo aan wali dhimanin ayaa la helay markaas ayaa la weydiiyay cidda dishay. Kolkii la ogaaday yahuudigii dilay ayuu rasuulka (s.c.w.) amray in yahuudigaas loo dilo sidii uu gabadha yar u dilay oo kale.
BOGGA UMUURAHA ISLAAMKA QEEBTA UU KA QAADANAYO BISHA RAMADAAN
Waxaa halkaa inoogu dhamaaday alxamdulillaah mowduucii aan ula magac daray ''aan isla lafa gurno meelaha Islaamka looga soo duulo'', oo ka koobnaa:
1. Qawaamada ragga
2. Guurka wax ka badan hal haween
3. Furitaanka oo gacanta ninka ku jirto
4. Dhaxalka (gabadha oo leh nus inta uu wiilka qaato)
5. Diyada (magta).
Waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay is waydiiyaan maxaa ku xiga marka aan dhameenay intaa aan kor xusay. Waxaa xaqiiqa ah inaan fooda hayno bishii barakaysaneed ee Ramadaanka ahayd. Saa daraadeed haddaan ahay qoraaga bogga umuurahaislaamka.somalitalk.com waxaan go'aansaday inaan ka hadalno fadliga, ramadaanka, waajibaadkiisa salaada taraawiix, iyo mowduucyo kale oo la xiriira bisha Ramadaan.
Hadduu Alle idmo waa inoo labatoddobaad kadib iyo casharkeennaa cusub ee ku saabsan Ramadaanka, sidaa iyo amaano Allah!.
Qore: C/risaaq Maxamed
. Sat, December 01, 2001